I-Big Yellow Lake Condo ne-Dock, i-Lake Front - I-Airbnb
I-Big Yellow Lake Condo ne-Dock, i-Lake Front
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Jacob
Le-condo elungiswe kabusha isogwini lwe-Big Yellow Lake ne-Little Yellow Lake; amachibi ahamba phambili e-Burnett County Wisconsin. Yonke imininingwane ibuyekezwe ngokubukeka nokuzwakala kwamahlathi enyakatho.
Itholakala ogwini lwe-Big Yellow Lake ne-Little Yellow Lake, amachibi ahamba phambili e-Burnett County, WI. Lena yi-Condo Unit #3 ye-Yellow Lake Condo Association.
Ikamelo lokulala elilodwa liqukethe umbhede omusha sha we-premium queen. Omunye uqukethe amawele amasha amabili e-premium angabekwa ndawonye ukwakha enye indlovukazi. Ikamelo lokuphumula linendawo yomatrasi ofuthwayo uma kudingeka indawo yokulala eyengeziwe. Kukhona indawo yegalaji etholakalayo uma ungathanda ukukupaka isikebhe noma imoto ubusuku bonke.
Ikhaphethi entsha, upende & phansi kuyo yonke indawo. I-trim, iminyango, amakhabethe asekhishini kanye negumbi lokugezela konke kubuyekezwe nge-pine ye-knotty ukuze kubukeke futhi kunethezeke emahlathini asenyakatho.
Izinga lakho eliyinhloko le-condo libheke i-Big Yellow Lake. Unezinyathelo ezimbalwa ukusuka emanzini ase-Big & Little Yellow Lakes njengoba ibhuloho elibahlukanisayo liseduze nendlu. Ukufinyelela kwesikebhe e-Big Yellow Lake kuqhele ngezinyathelo ezingu- kuphela. Nakuba noma yimuphi usayizi wesikebhe ungangena e-Big Yellow Lake, izikebhe zokudoba nomsebenzi wephrofayili ophansi ungangena futhi e-Little Yellow Lake nase-Yellow River ngokudlula ngaphansi kwebhuloho. Izibuko eziningana ziyatholakala ukuze zisetshenziswe kuqala kulabo abahlala kuma-condo e-Big Yellow Lake kanye ne-Little Yellow Lake.
Le ndlu iphinde ibe nokufinyelela okuhlanganyelwayo ematafuleni epikiniki, i-grill, umgodi womlilo nendlu yokuhlanza inhlanzi.
Lena yindlu yezinkathi ezine zokushisa ne-air conditioning.
Jabulela isevisi yendawo yokudlela ne-bar ngezinyathelo nje ngaphesheya kwendawo yokupaka e-Yellow Lake Lodge Restaurant & Bar. Lesi sakhiwo saziwa kakhulu ngendawo ngokudla neziphuzo zekhwalithi futhi sivulwa izinsuku ezingu-7 ngeviki unyaka wonke.
Ngathandana nendawo eminyakeni embalwa edlule ngemisebenzi ehlukahlukene engayenza endaweni. Konke kusuka ku-golfing, i-casino, i-snowmobiling futhi nakanjani, i-Yellow Lake iyichibi le-Premium esifundeni sokudoba nokuzijabulisa. Ngama-acres angu-2830 liyichibi elikhulu kunawo wonke e-Burnett County futhi njengoba i-Yellow River idlula e-Big Yellow Lake, ukudoba kuningi nakho konke kusuka ku-sturgeon kuya ku-muskie kuya ku-walleye kuya ku-pan fish etholakalayo.
Isikhundla se-Yellow Lake Condo #3 sihle kakhulu! Ungakwazi ukufinyelela kokubili i-Big Yellow Lake ne-Little Yellow Lake. Zombili iziqhingi zineziqephu zedokhi abaqashi be-condo abangafinyelela kuzo ngaphandle kwenkokhiso eyengeziwe ngesisekelo sokuqala sokuza kuqala. Ukufinyelela kwesikebhe se-Big Yellow Lake kuqhele ngezinyathelo ezingu- kuphela ukusuka esikhungweni se-condo.
Isivakashi siyakujabulela ukufinyelela okungu-100% kuleli kondo le-2 BR & 1 BA. Inefenisha ephelele futhi inakho konke okudingayo ukuze ube neholide lokuphumula e-NW Wisconsin.
Inhlangano ye-condo inezibuko eziningana kuwo womabili ama-Big & Little Yellow Lakes ukuze asetshenziswe ngokokuqala, ahlinzekwa kuqala.
Indawo ka-Cassandra itholakala e-Danbury, e-Wisconsin, e-United States.
Ngaphezu kokufinyelela e-Big Yellow Lake, i-condo iseduze nemizila ye-ATV neyeqhwa, izindawo zokudlala igalofu, ama-casino, njll.
Sicela usithinte nganoma yimiphi imibuzo futhi ngizobuyela kuwe ngokushesha ngangokunokwenzeka.